ဝိဇ္ဖ္ဖာဆိုတာ …… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၀ိဇ္ဖ္ဖာဆိုတာ ……
Posted by fatty on Oct 6, 2010 in Creative Writing |5comments
( ကျနော် အသံလွှင့် အကြောင်းတွေရေးနေတာကနေလိုင်းပြောင်းသွားတာ ခဏနားတဲ့သဘောပါ အပြောငိးအလဲပေါ့ … ကြာလာတော့ သူများဆိုမပြောနဲ့တော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ဟာ ကိုယ် ပြန်မဖတ်ချင်တော့ဘူး … နောက်မှဆက်မယ်နော ..အားပေးမှုများကိုတော့ ကြည်နူးရပါတယ်။ )
အဲ …၀ိဇ္ဇာဆိုတာ ..အတတ်ပညာ အသိပညာ မြင့်မားတဲ့သူတွေကို ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ သိပ္ပံ အတတ်မှာ တဖက်ကမ်းခပ် တတ်မြောက်ထားတဲ့ PHD ( physics )ဆိုပါတော့
သူလဲ ၀ိဇ္ဖာပါဘဲ …။ လိုင်းချင်းသာမတူတာပါ။ ဒီနေရာမှာ အကြောငိးတိုက်ဆိုင်ရင် သိပ္ပံသဘောနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးနဲနဲပြောပါမယ် ။
ဟိုးတုန်းက ကြားဖူးကြမှာပါ …သံသေတပြည်ဝ ..ပြဒါးသေတဆွေဝ ..ဆိုတာ ။ မြန်မာတွေ သံသေအောင် ..ပြဒါးသေအောင် ..ဖိုထိုးကြပါတယ် ။ အဲ အနောက်နိုင်ငံ ကလူတွေလဲ
သိလို့ကြိုးစားကြတယ်။ အဲအနောက်နိုင်ငံကတော့ ပိုပြီးပွင့်လင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ အရှ့တိုင်းကတော့ လှို့ဝှက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့သဘောရှိသူတွေက တယောက်
နဲ့တယောက် တိုင်ပင်ကြတော့ အချို့ကိစ္စတွေမှာ ပိုပြီးအောင်မြင်သွားကြတာရှိပါတယ်။ ဥပမာ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ သံသား .. အာကာသထဲသွားနိုင်တဲ့ ပွတ်အားကို
ခံနိင်ရည်ရှိတဲ့ ..ဘာခေါ်လား … အဲဒီသတ္တု အမျိုးအစား ထိလုပ်နိုင်တြယ်။ ဒီမှာတော့ အခုထုတ်နေတဲ့ ကားဘော်ဒီတွေက ဒံအိုးဒံခွက်သာသာပါဘဲ။
အေ၇ှ့တိုင်းသားတွေစရိုက်ကတော့ … မသူတော်တွေလက်ထဲရောက်သွားမှာ သိပ်ကြောက်ပါတယ်။ အခု နျူးကလီးယား ကိစ္စကြည့်ပေါ့။ ဒီဘက်ပိုင်းလူတွေကတော့ ရုပ်ပိုင်းထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပိုပြီး ဦးစားပေးတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ပါ။ ရုပ်ပစ္စည်းတွေပြည့်စုံချမ်းသာတာထက်
စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူပါတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျင့်စဉ်ကို ဦးစားပေးပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကအမျာနားလည်ထားတဲ့ ၀ိဇ္ဖာများဟာဒီသဘောပါဘဲ။ ဘုး၇ားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ .. ဘုရာဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်တာကလည်း လောကကိုကယ်တင်ဖို့ပါ .. ဇိမ်နဲ့သာ နှပ်နေခြင်ရင် အထက်ဆုံးဘုံတက်ပြီးနေမှာပေါ့ ..။ ၀ိဇ္ဖာများဟာလည်းဒီသဘောပါဘဲ။
ဒီနေရာမှာ တခုလေးထပ်ပြောချင်တာက … အဘ ဘိုးမင်းခေါင် ဟာ မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတဦးပါ ..အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်ကကိုး ..ကြားဖူးကြတဲ့အတိုင်းပါဘဲ မုံ့လုံးစက္ကူကပ်ပါ
လို့ ကြာကလပ်နဲ့ဆွမ်းတော်တင် ပုလ္လင်ပေါ်ကမျောက်ကလေး ဆင်းတဲ့လို့ပြေး ..ဆိုတာ သူကလုပ်တာပါ .. ဘိုးမင်းခေါင်ရဲ့စကားပါ။
ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ကိုပြောတာ .. အဲဒီမှာ ဘိုးမင်းခေါင် ဟာ ဘုရားတည်ပြီးပြည်သူအများကို မုံ့လု့းဆွမ်းတင်ခိုင်းပါတယ်။ တတိုင်းတပြည်လုံးက ဘုရားဖူးတွေလာပြိးဆွမ်းတင်ကြတယ်။ ပလ္လင်ပေါ်က မျောက်လို့ခေါ်တဲ့ ကုလားဖြူတွေ ဆင်းပြေးအောင်လုပ်တာပါ။
အဲဒါတွေက ဓာတ်သဘော ပညတ်သဘောတွေပါ ပါတယ်။ ၀ိဇ္ဖာများဟာ ကိစ္စ အရပ်ရပ် ရှိသေးလို့ အထက်ဘုံတွေကိုမသွားကြပါ။ …ကဲနောက်တော့ဆက်ရေးပါအုံးမယ်
ဓာတ်သဘော ပညတ် သဘောတွေကို ကြုံရင်လဲ ..လက်တွေ့ အနည်းငယ်စမ်းနိုင်အောင် ရေးပြပါအုံးမယ် … အဘဘိုးမင်းခေါင်သမိုင်းလဲနောက်တခါပေါ့။
အင်.. ဆရာဖက်ရဲ့ဟာကလည်း အစားအစာ ဆိုင်တန်းထဲက ဆူရှီးဆမ်ပယ်လ် ကျွေးတာစားရသလိုပဲ ပစို့မပို့လေး။ လုပ်ပါဗျ၊ တူနာ၊ရဲလိုးတေးလ်နဲ့စနက်ပါ ငါးအစုံပါတဲ့ ဆူရှီးပွဲလို။
ရှင်းလေရှုပ်လေလို့ အပြစ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်ရပါဘူး ပါပါ ပါဖက်ခ်ထ် ရယ် နည်းနည်းပါးပါးစောဒကာ တက်ပါရစေလားဗျ နေကောင်းသလားဟင်?
၀ိဇ္ဇာဆိုတာ ..အတတ်ပညာ အသိပညာ မြင့်မားတဲ့သူတွေကို ခေါ်ပါတယ် ဆိုတာကို တော့ထောက်ခံရတာပ
သိပ္ပံ အတတ်မှာ တဖက်ကမ်းခပ် တတ်မြောက်ထားတဲ့ PHD ( physics )ဆိုပါတော့ အဲ့ဒါကို ၀ိဇ္ဇာလို့ ဆိုတာကိုလေ
မဟုတ်ဘူးလို့ မစွတ်စွဲတော့ပါဘူး ပါပါပြောတဲ့ ၀ိဇ္ဖ္ဖာ(ဝိတ်ဖာ)ဆိုတာ ဖြစ်ခြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်(ကိုယ့်လက်ရေးကိုယ်ပြန်ကြည့်)
အတတ်ပညာရော အသိတရားရောပြည့်စုံတဲ့ ၀ိဇ္ဇာ တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
အထူးပြောခြင်တာက သိပ္ပံပညာပါ သိပ္ပံတတ်သူတိုင်းကို ၀ိဇ္ဇာ လို့ ခေါ်ရင်တော့ရှုပ်ကုန်မယ်ဗျို့ 
ဥပမာဆိုရင် ဒိုင်းနမိုက်ကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ အဲဗရက်နိုဘယ်ကြီးရယ် နျူကလီးယား ဖခင်ကြီးလို့ခေါ်လို့ ရတဲ့ အိုင်စတိုင်းကြီးရယ်လေ
သူတို့ သိပ္ပံပညာတွေနဲ့ သောက်ရူးထခဲ့ကြလို့ ဒီနေ့ လူသားတွေ ဖင်တုန်နေရတာ ပါဗျ မှားသွားသလား မစောရီးနိုင်ဘူး
(ဘုးရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ .. ဘုရာဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်တာကလည်း လောကကိုကယ်တင်ဖို့ပါ .. ဇိမ်နဲ့သာ နှပ်နေခြင်ရင် အထက်ဆုံးဘုံတက်ပြီးနေမှာပေါ့ .
၀ိဇ္ဖာများဟာလည်းဒီသဘောပါဘဲ) ဆိုခြင်တာက၀ိဇ္ဖာများကယ်လို့ လူတွေငြိမ်းချမ်းသွားတယ် ဒီလိုလား ဒါတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး လောဘဇောတွေပိုတက်လာကြတယ်လို့ တောင် ထင်မိပါတယ်
ပြောသာပြောရတာပါ နှစ်လုံး တစ်ကွက်လောက် အသေချာပေးရင် ထောက်ခံမဲကလေးတော့ပေးပါ့မယ်
(တဏှာ၊ကာမ၊ကိလေသာ တို့ ဖုံးလွှမ်းနေကြခြင်းသည် အစွန်းတဖက် ထိုဖုံးလွှမ်းခြင်းတို့ ၏ လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသော ကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့် မှန်ကန်စွာသိသော အကြောင်းရှစ်ချက်သည်ပင် ၀ိဇ္ဇာ ဖြစ်ပါသည် ဟူ၍တော့ ပြောကြတာပေါ့ဗျာ ဘုရားဟောတယ်လို့ )
အင်း ..ပြည့်စုံအောင်လဲရေးချင်ရဲ့ … ထပ်ထပ်ပြီးတော့လဲရှင်းချင်ပါရဲ့ …ဒါပေတဲ့ costing ထည့်တွက်နေရတဲ့ဘ၀မို့ … နားလည်ပေးကြပါ။ လက်ရေးမှားရင်လဲသီးခံပါ
သဘောပေါက်ရင်ရပါပြီ… အဓိက ကတော့ အတတ်ပညာတခုတခုကို တဖက်ကမ်းခတ်အောင်တတ်မြောက်သူကို ခေါ်ပါတယ်။ ဘုရားဟော ၀ိဇ္ဇာ ..အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ မတူလှပါဘူး
အဲဒီက ဥပမာပေးထားသလိုပါဘဲ … ဒိုင်းနမိုက် ဆရာကြီးတွေ နျူးကလီးယားဆရာကြီး တွေကိုလဲ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့လဲ သေကြပါစေတော့ဆိုတဲ့ရည်၇ွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ခဲ့တာ
ဟုတ်မထင်ပါဘူး … ဒါကြောင့် ဒီက ထွက်ရပ်ပေါက်ဝိဇ္ဇာကြီးများဟာ ..နည်းပညာတွေကိုအရမ်းမလွှတ်ပါဘူး … လှို့ဝှက်တတ်တယ်လို့ပြောသားဘဲ …၀ိဇ္ဇာများဟာ သူတို့ တတ်စွမ်းသမျှနဲ့ ..ကယ်တင်နေပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပါအုံးမယ် …. ဘုရားသာသနာမကွယ်အောင် စောင့်ေ၇ှာက်နေကြတာပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဘဲကြည့် … အစွန်းရောက်တွေ
အသေခံဗုံးခွဲသူတွေ .. မရှိသလို ဒါမှမဟုတ်နည်းလှပါတယ်။ နောင်ဘ၀သံသရာ ဆိုတာယုံကြတဲ့အတွက် …မကောင်းမှုကိုမလုပ်ကြပါဘူး …အနဲဆုံးတော့ လျှော့ကြပါတယ်။
နောင်သံသရာဆိုတာမယုံကြရင်ဖြင့် … လက်ရှိလူဖြစ်ရတုန်း အသေဆော်ကုန်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့ လူတွေကိုကယ်တင်နေတယ်ဆိုတာ … သာသနာကိုမကွယ်အောင်
စောင့်ေ၇ှာက်နေတယ်လို့ အကျဉ်းမှတ်ရင်တော်ပါပြီ။ ချဲနံပတ်ပေးပြီး ကယ်တင်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ …ဒါပေမဲ့ သာသနာပြုဖို့အကြောင်းပါလာသူများကိုတော့ … တနည်းနည်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှု့လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ … သစ္စာတရားများကိုအမှန်တကယ်သိမြင်သော …အသိရှိသူကိုသာဝိဇ္ဇာဟုခေါ်ခြင်း ..နှင့်ကွဲပြားပါတယ်။ ကျော်အောင်စံထားဆရာတော်၏
စာထဲမှာ … ၀ိဇ္ဇာများကိုရေားဟောခဲ့ရတာပါ ပါတယ်။
ကျနော် အရင်က မြန်မာလိုမရိုက်တတ်လို့ လက်နဲ့ေ၇းပြီး စာရွက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်၇ိုက်ပြီး post တင်ရပါတယ် …တချို့သိမှာပါ။ အခုမှရိုက်တတ်ခါစမို့မှားရင်လဲခွင့်လွှတ်ဖို့နဲ့
စာရိုက်ရင် … လက်ရေးနဲ့ရေးရတာလောက် feel မလာပါဘူး အလေ့အကျင့်နဲသေးလို့နဲ့တူပါတယ် ….ဒါကြောင့် ထိရောက်မှု ..ဆိုလိုချက်တွေ .. လိုနေပါလိမ့်အုံးမယ်ခင်ဗျား။
အဲ ..ငါးအစုံ ..ရေဘ၀ဲပါ ပါတဲ့ စူရှီတပွဲ လုပ်ရောင်းရင်အတော်ရမှာဘဲနော် …ဟဲဟဲ…။
အဲဒီအထဲမှာကြည့်ရင် လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသော ကျင့်စဉ် ကို